Breaking: အဓိကလက်ပတ်နာရီများကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် Baselworld မှထွက်ခွာ | HIGH ရတနာအိပ်မက်
ချိုးဖောက်ခြင်း - အဓိကနာရီအမှတ်တံဆိပ်များသည် Baselworld မှထွက်ခွာသည်
မှတ်တိုင်နှင့်ရတနာကုန်အမှတ်တံဆိပ်များက Baselworld မှထွက်ခွာသွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သောကြောင့်တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုဖတ်ပါ။
ဧပြီလ 14, 2020
Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard နှင့် Tudor တို့သည် Baselworld မှထွက်ခွာမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
လက်ပတ်နာရီနှင့်ရတနာအိမ် ၅ လုံးအားနာရီနှင့်ရတနာကုန်စည်ပြပွဲမှထွက်ခွာမည်ဟုကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဤအမှတ်တံဆိပ်များသည် Fondation de la Haute Horlogerie နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဂျီနီဗာမြို့၌အသစ်ဖွင့်လှစ်သောပွဲသို့ပါ ၀ င်မည်။
၎င်းသည် Baselworld ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အတွက်အရေးကြီးသောအကျိုးဆက်များရှိလိမ့်မည်။
Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard နှင့် ရေရှိဖို့ ထွက်သွား ဘေဆယ် ဂျီနီဗာတွင်လက်ပတ်နာရီကုန်သွယ်မှုပြပွဲအသစ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန် Fondation က de la Haute Horlogerie.
ဒီပြပွဲကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်earlyပြီလအစောပိုင်းက Palexpo မှာတစ်ပြိုင်တည်းကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ် နာရီနှင့်အံ့ဖွယ်အမှုများ.
ဤထွက်ခွာသွားမှုသည် Baselworld စီမံခန့်ခွဲမှု၏ညှိနှိုင်းမှုမပါဘဲပြုလုပ်သောတစ်ဖက်သတ်ဆုံးဖြတ်ချက်များစွာ၏နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိနာရီပြပွဲရွှေ့ဆိုင်းခြင်းနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်မျှော်လင့်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
Fondation de la Haute Horlogerie မှစီစဉ်သော Watches & Wonders နှင့်ချိတ်ဆက်မည့်ပြပွဲသစ်သည် Palexpo တွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကဏ္ Switzerland ၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကိုဆွစ်ဇလန်နှင့်နိုင်ငံတကာ၌ပါအရေးပါသောနေရာတွင်ပေးလိမ့်မည်။
အခြားအမှတ်တံဆိပ်များကိုလည်းမသတ်မှတ်ရသေးသည့်အသုံးအနှုန်းများအရထပ်ထည့်နိုင်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်အသစ်သည်လက်လီရောင်းချသူများ၊ စာနယ်ဇင်းနှင့် VIP ဖောက်သည်များအားအဓိကရည်ရွယ်သည်။
Jean-Frédéric Dufour၊ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်၊ Rolex SA နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်၊ Montres Tudor SA, said:
"ကျနော်တို့က ၁၉၃၉ ခုနှစ်ကတည်းက Baselworld မှာပါ ၀ င်ခဲ့ဖူးတယ်။ MCH Group ရဲ့မကြာသေးခင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပဲကျွန်တော်တို့ဟာဒီနာရီပြပွဲမှာအလွန်စွဲမက်စရာကောင်းခဲ့ပေမယ့်၊ Rolex မှအစပြုဆွေးနွေးမှုများအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်နှင့်ဆွစ်ဇာလန်လက်ပတ်နာရီကဏ္ sector ကိုအဆုံးမဲ့မယိမ်းမယိုင်အတိုင်းအတာဖြင့်မျှဝေပေးသောမိတ်ဖက်များနှင့်ပွဲတစ်ခုအသစ်ပြုလုပ်ရန်မှာသဘာဝကျပုံရသည်။ ဒါကငါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ရဲ့နာရီအသစ်တွေကိုတင်ပြနိုင်ဖို့၊ အင်အားတောင့်တင်းအောင်လုပ်ဖို့နဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မယ်။ ”
Thierry Stern မှသမ္မတ Patek Philippe said:
Baselworld မှထွက်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည် Stern မိသားစု၏စတုတ္ထမျိုးဆက်ဖြစ်သည့်ဤရိုးရာနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင်ပါ ၀ င်ရန်ကျွန်ုပ်အတွက်မလွယ်ကူခဲ့ပေ။ ဒါပေမယ့်ဘဝကအဆက်မပြတ်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတယ်၊ အရာရာပြောင်းလဲသွားတယ်၊ လူတွေကလည်းပြောင်းလဲလာတယ်၊ အဲဒါကလက်ပတ်နာရီမျှတတဲ့အဖွဲ့အစည်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေ၊ မနေ့ကမှဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေသေချာပေါက်မလွယ်ကူနိုင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစဉ်အမြဲလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ ယနေ့ Patek Philippe သည် Baselworld ၏အမြင်နှင့်မကိုက်ညီတော့ပါ။ ဆွေးနွေးမှုများနှင့်မဖြေရှင်းနိုင်သောပြproblemsနာများစွာရှိနေပြီးယုံကြည်မှုမရှိတော့ပါ။ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏လက်လီရောင်းချသူများ၊ ဖောက်သည်များနှင့်စာနယ်ဇင်းများ၏တရားဝင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ကနှစ်စဉ်ဆွစ်ဇာလန်နာရီထုတ်လုပ်သူများထံမှပုံစံအသစ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ရမည်၊ တစ်ချိန်တည်းတွင်တစ်နေရာတည်း၌၎င်း၊ ထို့ကြောင့် Rolex နှင့်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်နှင့်အခြားပါဝင်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်သဘောတူညီမှုအရကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျီနီဗာတွင်ထူးခြားသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့၏ savoir-faire ၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။"
FrédéricGrangié၊ Chanel နာရီဥယျာဉ်နှင့်လက်ဝတ်ရတနာများ said:
“ CHANEL သည်၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဲ့သို့ပင်တူညီသောလွတ်လပ်မှုနှင့်အတူတူပင်၊ Swiss Watchmaking ၏တန်ဖိုးများ၊ အသိပညာ၊ အရည်အသွေးနှင့်တိကျမှုတို့ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်မြှင့်တင်ရန်တူညီသောဆန္ဒရှိသည်။ ဤစတင်ခြင်းသည် CHANEL Watchmaking ၏သမိုင်းတွင်အဓိကမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုသည် ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးရေရှည်မဟာဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤပြပွဲကကျွန်ုပ်တို့၏တီထွင်မှုအသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံသည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်တင်ပြရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးမြင့်စံနှုန်းများ။ "
Co-President Chopard နှင့် Cie SA တို့။ Karl-Friedrich Scheufele said:
"Chopard သည် ၂၅ စတုရန်းမီတာခန့်ရှိသော ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင်ဘေဆယ်လ်ပြပွဲတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြသခဲ့သည်။ အသေအချာစဉ်းစားပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုသည် Rolex အစပြုမှုကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်နာကျင်သောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည့် Baselworld မှအနားယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒီဂျီနီဗာမှာ Watches & Wonders နဲ့အပြိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနာရီအသစ်ကိုဖန်တီးလိုက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ပတ်နာရီမိတ်ဖက်တွေနဲ့ငါတို့အတွက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ ဖောက်သည်များ မဟာမိတ်များမှတစ်ဆင့်ဤခမ်းနားသောဆောင်များသည်ဆွစ်ဇာလန်လက်ပတ်နာရီ၏တန်ဖိုးများနှင့်အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားများကိုမြှင့်တင်ရာ၌ပူးပေါင်းနိုင်လိမ့်မည်။ ”
Jerome Lambert သည် Fondation de la Haute Horlogerie ကောင်စီကိုယ်စား said:
“ Fondation de la Haute Horlogerie သည်လာမည့်Aprilပြီလအစောပိုင်းဂျီနီဗာမြို့၌သမိုင်းဝင် Watches & Wonders အဖြစ်အပျက်ကိုအားကောင်းစေမည့်အလှပြင်ဆိုင်အသစ်တစ်ခုကိုကြိုဆိုခြင်းဖြင့် ၀ မ်းသာသည်။ ”
Tags:ဘေဆယ် • နာရီ
မှတ်ချက်0ခုချိုးဖောက်ခြင်း - အဓိကနာရီအမှတ်တံဆိပ်များသည် Baselworld မှထွက်ခွာသည်"